Inayiloni yokusakaza ingelinye lamaplastiki wobunjiniyela asetshenziswa kakhulu, ikakhulukazi entweni eyenziwe ngomshini njengempahla emelana nokugqoka nokunciphisa ukugqoka ukufaka izinsimbi ezingafakwanga insimbi ezinjengethusi nama-alloys. Umkhiqizo wenayiloni ongamakhilogremu angu-400 ...
Inkampani yethu yasungulwa ngo-1974, iyinkampani yokuqala yenayiloni eChina. Le nkampani itholakala e-Huai'an, esifundazweni i-Jiangsu, idolobha likaNdunankulu uZhou Enlai onendawo enhle. Yasungulwa ngo-1974, onguchwepheshe producer ...
I-MC inayiloni induku, eyaziwa nangokuthi i-cast nylon rod, iwuhlobo lwezinto eziluhlaza ezincibilikisiwe, i-c6h11no, okuyinto eluhlaza engcolisiwe, esebenzisa izinto eziyisisekelo njenge-catalyst. Induku ye-MC inayiloni kanye ne-activator nezinye izithasiselo zenziwa i-monomer ukuze ibe yi-po ...